बालीको यात्रा (3।): तपाईंको औंलामा Suenee Universe
यात्रालाई बाली (3।): तपाईंको औंलामा
5018x 06। 01। 2019 1 रिडर
श्रेणी: तपाईंको बाटोमा
हामी हवाईअड्डी दुबईमा छोड्छौं। यो 09 छ: 00 स्थानीय समय बिहान। हामी बालीको टापुमा आठ घण्टाको उडानको प्रतीक्षा गरिरहेका छौ जहाँ हामीले 22 मा भूमि चाहिएः 00। समयको माध्यमबाट यात्रा गर्ने कति सानो छ :) :)
Po दुबई पैदल यात्रा हामी एयरपोर्टमा फर्क्यौं। हामी बायाँ सम्म केही घण्टा बाँकी रह्यौं, त्यसैले हामी एक ठाउँ खोजिरहेका छौं जहाँ हामी आराम र सम्भावित रूपमा लेख्न सक्छौं। मैले अन्ततः एक घण्टाको लागि सोधे। यो धेरै गाह्रो थियो - बढी मैले अन्तिम एंटीबायोटिक्स लगाए। यो पहिलो पटक थियो, चार वर्ष भन्दा बढी, मैले पाउडरहरूलाई सहज गर्ने निर्णय गरे किनभने मेरो गलामा दुखाइ मलाई प्रस्थान गर्नुअघि नै पकड्यो। कहिलेकाहिँ म हर्बल ऊर्जा र उपचार क्रिस्टल संग काम गर्न चाहन्छु, तर अहिले त्यहाँ धेरै समय थियो। मैले लगभग अन्त्य गरें कि ब्रह्मांडले मेरो प्रयास गरिरहेको छ ... यदि म वास्तवमा चाहन्छु ठूलो जम्प. थकानको पहिलो लहर र थकानको आन्तरिक चिसो आयो। यद्यपि, अप्ठ्यारोमा मलाई बिहानको हरियो चियामा बागेटको साथ बित्यो :) यो रमाइलो थियो।
हामी बोइङ BA777-300 सँग अमीरातबाट उड्छौं। विमान सुन्दर छ, यो FLY दुबई विरुद्ध मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। एक शब्दमा अद्भुत! हामी सिफारिस गर्दछौं - हामी धेरै पटक छक्क परेका छौं - उडान उडानकर्ताहरू र भोजपुर, महान फुटवेल र चलचित्र र अन्य मनोरञ्जनको उत्कृष्ट चयनले। यो साँच्चै राम्रो र राम्रो थियो जब तपाई हामीले सोचेका थिए कि हामीले विमानमा आठ घण्टा बितायौ। तिनीहरूले हाम्रो लागि धेरै राम्रो हेरचाह गरे। उडानको दौडान, हामीले दुई पटक धेरै शाकाहारी व्यंजनहरू पायौ। सबैका लागि निःशुल्क पेयहरू उपलब्ध थिए - सबै भित्र टिकट मूल्य.
प्राग देखि बाली सम्म एक लामो यात्रा
हामीसँग सान्त्वना छ
शाकाहारी खाना: राम्रो भोजन
सुन्दर हुनु र वास्तवमा यो कुरा हो कि तपाईं अचानक भूमध्य रेखाको पछि लाग्नु हुन्छ। तपाईं केवल अद्भुत ठाउँहरू उडान गर्नुहुन्छ जुन तपाईले मात्र टेलिभिजनबाट जान्नुहुन्छ, र यसले अचानक तपाईंको हृदय बढाउँछ। विमानको नक्सामा कुआलालम्पुर, जकार्ता, सिंगापुर, सुमात्रा, र जावा हङकङमा टाढा मुस्कुराउँदै छन्। महसुस गर्ने कि तपाईंसँग आफ्नो हातको सबै एक्स्ट्राहरू छन् ... यी सबै ठाउँहरू सामान्यमा एक चीज छ, र त्यो पानी हो। प्रत्येक दिन मुख्य भूमि को यसको झटके संग चिकनी शक्ति र हाम्रो ग्रह को हर सुन्दर भाग को आकार बनाइन्छ। उत्सुक चासोको साथ मैले नक्शा देख्छु र उडानको यात्रा गर्दछु।
जकार्ता नजिकैको मन्दिर
सुमित्रा: म्यारा टाकस बौद्ध मन्दिर
जावा: मंदिर को Prambanan
हामी थोडा ढिलाइ संग उभिन्थ्यो, किनकि ती द्वीपहरु मा तीव्र बर्षहरु र बर्फीवारहरू छन्। हामी अधिक सराहना गर्छौं र धन्यवाद! यो रात हो।
एक बंदर राजाले हामीलाई शिलालेखको साथमा विमानस्थलको हलमा स्वागत गर्दछ: "बालीमा स्वागत छ" (बालीमा स्वागत छ)। तुरुन्तै मलाई यस द्वीपको ऊर्जाले कसरी मेरो प्राण छोयो। म अनुकूल मुस्कुराउने अनुहारहरू भेट्छु। यो हाम्रो देश वा दुबई भन्दा भन्दा फेरि एकदम फरक संसार हो।
चेक इन हॉलमा एक लामो लामो लाम छ। मेरा सहयात्रीहरू लगभग एक घण्टाको सामान सामानमा पर्खिरहेका छन्। हामी अझै पनि आप्रवासन विभागमा 30 दिनको लागि एक पर्यटक भिसा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ र फेरि बाहिर जानुहोस्। यद्यपि 22: 00 यहाँ छ, मैले तपाईंलाई आधी आधी रात पछि पार्वतीमा देख्न सक्दिन।
अचानक ठूलो आनन्द आउँछ। त्यो एक लाखपति हो !!! म यूरो प्रति रुपैयाँ (आईआरडी) परिवर्तन गर्छु र मेरो बैंकोटमा मेरो लाख मिलियन पाउनेछ कि म पनि गिन सक्छु! यो अजीब भावना हो। मलाई मेरो मानसिक कदम महसुस हुन्छ ... मैले आफ्नै आफ्नै मान कसरी सोचें। म सानो असुरक्षित महसुस गर्दछु किनभने यो मेरो लागि नयाँ छ। यो केवल धीरे - धीरे हो कि मलाई भविष्यवाणी हो उहाँले सजिलै उठ्यो र थोडा बायाँ, केहि हुनेछ;)। यो कोर्स 1 CZK = 632 आईआरडी हो र चीज र सेवा को मूल्यहरु त्यहि हुन्। म यस विशेष संसार को खोज गर्न को लागी तत्पर छ ...
बालीमा स्वागत छ
आप्रवासनको लागि पर्खँदै
हामी एक लाखौं !!!
हवाईअड्डामा हामी भावनाको अनुसार एक टैक्सी छनौट गर्दछौँ। हामी सबै थकित छौं, यद्यपि हामी सबैलाई निर्देशन दिएका छौं कि मूल्यहरू यहाँ छलफल गर्न अनिवार्य छ, हामी कम मात्रामा 10 USD सँग सहमत छौं। हामी बेकन बीच रिसोर्टमा पुग्यौं, जुन हामीले पहिलो रात रोज्यौं। होटल हरीले घेरिएको छ र एक निजी पूल छ। सडक वरिपरि एउटा ठूलो विभाग पसल हो। कोठा धेरै लक्जरी छ - एक तारांकन संग एक।
रात सीesta द्वारा पूल
कोठामा, मलाई ल्यान्डिंगबाट पहिलो थोरै चित्रहरू पठाउन छिटो WIFI छ। यो 03 को बारे मा छ: 00 रात मा। (प्राग बीच7घन्टा हो, त्यसैले 20: 00।)
गरौं YT Greentara Mantra र हामी भोलिको दिनको लागि योजना योजना गर्दछौं। हामी हामीलाई आवश्यक पर्न मद्दत पाउन मद्दत गर्नको लागि व्यक्तिगत मार्गदर्शक भाडामा लिन्छौं। हामी पत्ता लगाउँछौं कि हामी सप्ताहांतमा आइपुग्यौं जब वर्षको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्सव टापुमा छ। यो एक स्थानीय परम्परा हो जुन अधिकांश पर्यटकहरूले गर्न सक्छन्, तर हामी एक विशेष प्रवेश व्यवस्था गर्न सक्छौं ...
यो आज म तपाईंलाई भन्छु कि बाली भिक्षुहरु को एक शब्द संग: आफ्नो आँखा खुल्ला राख्नुहोस् ताकि तपाईं ग्रहको सुन्दरता देख्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको घर खुल्ला हृदय र ठूलो दिमागको आवश्यकता पर्दछ। त्यसपछि त्यहाँ तपाईंको वास्तविकतामा चमत्कार हुनेछ जुन किटच जस्तो नबनाउँदछ।
तपाईं स्थानीय अनुष्ठानको साँच्चै रहस्यमय अनुभव बताउन अगाडी हेर्न सक्नुहुन्छ। म बिस्तारै इन्टरनेट जडानको साथ संघर्ष गर्दैछु। म स्थानीय SIM कार्ड पाउनेछु र थप अनलाइन प्रयास गर्ने छु। म तपाईंलाई सामेल गर्न चाहन्छु प्रत्यक्ष प्रसारणमाचाँडै सकेसम्म त्यहाँ यति धेरै म तिमीलाई देखाउन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु ... र म पहिलो दिन मात्र हुँ! म सकेसम्म तपाईँलाई फिर्ता आउनुहुनेछ। :)
अपडेट गरिएको: 24.03.2019, 21: 20
लेखक: Sueneéaमोनिका ताइउरा जट्कोवा
टैग: बाली, जाभा, पैसा, खाना, प्राग, शाकाहारी, ब्रह्मांड
श्रृंखलाबाट थप भागहरू
बालीको यात्रा (1): अज्ञातमा साहसिक सुरु हुन्छ
03। 01। 2019
बालीको यात्रा (2 भाग): स्थानान्तरण स्टेशन - दुबई
- यो साइट सही छ 104 प्रयोगकर्ताहरू अनलाइन